Resaky ny mpitsimpona akotry : ny soa no fianatsa, ny ratsy tsy atao lova | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ny soa no fianatsa, ny ratsy tsy atao lova
Na atao aza hoe no tsy hanome rariny an-dRavalomanana, tsy azo odian-tsy jerena ny fahadisoan’ireo nifandimby tamin’ny fanosihosena fahalavo na famelivelezana amin’ny kanota fa mitady hiarina. Tsy manala ny fahadisoan’ny teo aloha akory ny fanebahana ny famerenan’ny mpandimby ny fanaovana ota sahala. Mifanesisesy nihatra tamin’ingahy Ravalomanana na ny fanakatsakanana olom-pirenena hiverina eto an-tanindrazany, na ny tsindry hazolena ampiarin’ny sampana miadidy ny haba sy hetra, ary ao amin-dramatoa vadiny amin’ny maha Ben’ny tanàna azy ity, ny familafilana ataon’ny fanjakana foibe mikasika ny tovana fanatevenana ny teti-bolan’ny kaominina. Marina fa efa nation-dRavalo kilalao daholo izany fomba izany, ny fampatsiahivana izany anefa tsy ampy hamotsorana an’ireo mpandimby izay nandova ny fomba fanao ratsy. Mety ho ara-dalàna ary rariny noho izay raha atao savahao mikasika ny tetika maizina sy ny trosa tsy nefaina ao amin’ireo orin’asa fehezin-dRavalo. Tsy rariny anefa ary very hasina ny lalàna, ny fampiharana azy ho lanja roa tsy mitovy dia lasa fampiasana azy fotsiny ho fitaovana atao famoretana andaniny ary ankilany fanomezana tombony tsy ara-dalàna. Ingahy Ravalomanana koa moa dia mbola tratra tsy ampy fitandremana indray fa araky ny kajikajy voalazan’ity sampana ity dia mbola nanantena fampiasana hafetsifetsena ahafahany miporitsaka anelanelan’ny makarakara. Samy goaika antitra, tsy hifampianatra fomba famitapitahana.
Ny amin’izao fotoana izao na ny lalàna aza hono tsy ampy hiaro rehefa misy olona matanjaka mila soketa ka mitady loza ho an’ny hafa. Asa izay fahamarinan’izany. Ny azo antoka dia raha manana fahavalo na raha hirotsaka hifampitolona ao anatin’ny sehatra pôlitika dia tsy maintsy madio araky ny lalàna eo am-pidirana. Rehefa ao anatiny moa dia samy mahafantatra fa resaka hafa.
Ny fiovana takian’ny vahoaka dia tsotra, ny tsy fampiharana intsony ny lalàna atao arakara-bika sy tarehy, sy ny fitsaharan’ny fanjakazakana ampiasaina ho fitadiavana tombontsoa manokana na entina hanosihosena sy hanibazimbana ny zanak’Ikala hafa.